IBlues Guitar yeeDummies Cheat Sheet
Ukudlala ikatala eblues, okokuqala kufuneka wazi iziseko zekatala ngokubanzi, oko kuthetha ukuba kuchonga iinxalenye zekatala kwaye ube nakho ukuguqula umzobo we-chord. Emva koko unokuqhelana neendlela eziqhelekileyo ezivulekileyo nezishukumayo zokwenza imilo kunye nokwenza isitayile segita yeblues.
Izixhobo zeGuitar, Imizobo yeChord, kunye neTablature
Ukudlala ikatala eblues, okanye naluphi na uhlobo lomculo wekatala, kuyanceda ukukwazi ukubona iindawo zekatala, ezichongiweyo apha. Kuyanceda ukukwazi ukufunda imizobo ye-chord kunye neekatala ezinemigca emithandathu Uluhlu lwamagama lonto ndikuxelele ukuba yeyiphi i-frets cinezela ukuba yeyiphi imitya . Isazobe sesampulu yomzobo kunye ne-tablature zibonisiwe apha nazo:
IiNdawo eziVulekileyo eziVulekileyo zeBlues Guitar
Ikatala ye-Blues imalunga nesitayile, hayi malunga nezixhobo. Ikatala ye-Blues ayisebenzisi iindlela ezahlukeneyo kunayo nayiphi na enye indlela yokudlala isiginci; uzisebenzisa nje kulungelelwaniso olwahlukileyo ukwenza iziphumo ezahlukeneyo. Amashumi amabini amagqabantshintshi evulekileyo esithuba sokudlala esisetyenziselwa ukudlala iblues yegitare - okanye nasiphi na isitayile segita- kubonisiwe apha:
Iifom zeChord eziHambisekayo zeBlues Guitar
Ukuhamba okushukumayo akunazikhundla zivulekileyo. Ukudlala isiginkci seBlues kusetyenziswa iifom zokuhamba ezinokushenxiswa nangalo naluphi na olunye uhlobo lwesitayile, kubandakanya iindlela ezi-6 zomtya eziboniswe apha:
Ukuhamba okushukumayo kunye nengcambu kumtya we-6.
Iimpawu eziqhelekileyo ezihambayo ezigxilwe kumtya we-5 zibandakanya ezi:
Ukuhamba okushukumayo kunye nengcambu kumtya wesi-5. Olunye uhlengahlengiso oluntsonkothileyo lwe-5th-string-chords chords.
akhangeleka njani amanzi abilayo
iintlungu ezisezantsi zepop
ukuseta njani umbane
Ithebhulethi emhlophe eyi-l484
tizanidine hcl iziphumo ebezingalindelekanga